Apho kukho okulungileyo iindawo kuhlangana abantu ukuba ndiza emva ezinzima budlelwane. Mexican-Intanethi Dating
Mna anayithathela sele balingwe-intanethi dating kodwa uninzi abantu wam indawo kwi zephondo bakholisa ukuba abe emva nje ngesondo okanye nje casual dating. Akunyanzelekanga ukuba phumani ukuhlangabezana amadoda kakhulu njengoko uninzi bahlobo bam kuba abantwana, ngoko ke akunyanzelekanga ukuba ube nabani ukuya ngomgca. Ngoko ke apho ayikwazi ndiya kuhlangana umntu. Ndiza non-unqulo ngoko ibandla ayi i. Mna anayithathela sele balingwe-intanethi dating kodwa uninzi abantu wam indawo kwi zephondo bakholisa ukuba abe emva nje ngesondo okanye nje casual dating. Akunyanzelekanga ukuba phumani ukuhlangabezana amadoda kakhulu njengoko uninzi bahlobo bam kuba abantwana, ngoko ke akunyanzelekanga ukuba ube nabani ukuya ngomgca. Ngoko ke apho ayikwazi ndiya kuhlangana umntu. Ndiza non-unqulo ngoko ibandla ayi i-khetho noba. Efanayo kwenzeka izinto ukuze guys. Ufumane kwi ezinzima ubudlelwane kunye kubekho inkqubela kuwe kuphulukana nayo kakhulu yakho omnye abahlobo, ufumane rusty, ube lacking ukukholosa kuthatha ixesha elide ukufumana wakha emva phezulu. Dating ngu nzima ngakumbi ukuba ukhe ubene ikhangela umntu ngaphezu nje hookup. Efana bezinga girls, ndiye vs – girls abo baya hook phezulu nam sisezantsi. I-bezinga girls abo babeya hook phezulu nam vs – okkt ndifuna ube ngaphezulu ezinzima kunye ngu ngokulinganayo njengoko low. Ukususela wam imbono kukho na elungileyo impendulo. Ukuba sihamba ngaphandle kunye kufuneka injongo ka-ingxowa-a ezinzima budlelwane, awusoze ukulifumana. Mna anayithathela balingwe kwaye, kwezinye iimeko, ngempumelelo zahlangana girls nje malunga ezindaweni imaginable. I-bar, i-intanethi, ulwandle, umsebenzi, mutual abahlobo, kwi boat, kwi inqwelo moya njl-njl.
Baphuma bonke ukuba mna kuphela zilawulwe ukuba kuba ezimbalwa budlelwane nabanye ukuba ifumene ezinzima kwaye omabini kubo ndandidibana nge-mutual umhlobo. Andiqondi ukuba ngu coincidence noba. Ngoba, xa uphinda-kuhlangana abantu ngexesha bar, kwi inqwelo moya, kwi boat, kwi beach, njalo-njalo. ke phantse uhlobo jikelele njengoko ukuba ngaba mhlawumbi baya kuza kuba ngokwaneleyo ngokufanayo nawe, ngumcelimngeni okanye ithelekiswa ngokwaneleyo ukuba enze ngayo nantoni na ezinzima. Njenge ukuba mna wahamba phezulu ukuya jikelele zinokuphathwa kubekho inkqubela kwi street, mna nani ke ngokupheleleyo jikelele malunga nokuba ngaba siya kuba nantoni na ngokufanayo njengoko kunye mutual abahlobo mna ngokubanzi kuba abanye usharedi inzala kunye nawe, ngoko ke odds kunyuka ngocoselelo. Basically, jikelele abantu kuzo zonke likelihood akunayo nantoni na ngokufanayo nawe. Hayi ukuze babe andinaku ngenxa nje malunga wonke umntu kwiziko elinye kwi-incopho ubomi babo sele uye bar kwaye hooked phezulu kunye umntu. Ngoko ke, ngexesha abanye incopho umntu wakho amaphupha kwakuyiminyaka i-bar kwaye umhlawumbi ingaba zahlangana kwabo ekuhlaleni jikelele. Kodwa ngaphandle kokuba bedlule ezininzi abantu ingxowa-loo mntu ngalo jikelele babe thatha ulote yovavanyo kwaye impazamo mhlawumbi musa ufuna ukwenza(njengoko a guy ndiza OK ngayo). Ngoko ke, yintoni ekufuneka uyenze. Icebiso lam nje kukwenza izinto nisolko anomdla kwaye qiniseka ukuba uhlale esebenzayo. Ekugqibeleni into kusebenza ngaphandle. Ukuba wenza izinto ngaba uthando abantu kufuneka ahlangane esenza ezo zinto mhlawumbi kuba ngaphezulu ngokufanayo nawe kunokuba umntu ekuhlaleni jikelele. Icebiso lam kuba ke kwenkundla ngu musa kuhamba kunye injongo intlanganiso umntu othile nje hamba uyonwabele socialize kunye nabantu nje ukwenza abahlobo kunye abantu. Yandisa yakho loluntu isangqa ngaphandle kwenkundla ukuba ufuna ukufumana ishumi abantu abaphila into ngokufanayo nani nkqu ukuba babe ukuba ezinye girls baya mhlawumbi ngamnye uyazi amakhulu guys kummandla okanye ukuba babe ukuba enye, babe ukuba umntu ukubetha nedolophu kunye. Ukuba unayo into ngokufanayo kunye nabo baza kuba into ngokufanayo nawe kukho ngcono ithuba mhlawumbi kuba into ngokufanayo ne-zabo guy abahlobo.
Anyways ngu-bam thatha
Kuthatha elide ixesha rebuild yakho loluntu isangqa emva ezinzima budlelwane. Mna waqala ke phandle kwakhona kwaye ekubeni omnye le Matshi ndaba bangonwabanga entlakohlaza kunye nokungabikho impumelelo girls kwaye hayi kakhulu ngcono Ehlotyeni. Mna ke ndiqale ukuya ukuthandabuza ndinga ngonaphakade ukufumana izinto kwakhona kodwa nje kutsha nje mna anayithathela sele esenza ngenene kakuhle. Andiqondi ukuba mna anayithathela zifunyenweyo nantoni na ezinzima iselwa kanti kodwa ndiza ngokuqinisekileyo umva kulo umdlalo, kuba onayo wam ukukholosa emva kwaye musa bazive ngoko ke alaphukanga simemo kwakhona. Yima elindile, ezibalaseleyo zinto lifestyles kuza xa wena musa ukubala kuyo. Kanjalo, hayi kwaziswa nisolko omiselwe, nangona kunjalo desperation ngu unattractive kwi ladies, ngoko ke ngu nokungabikho ukukholosa, ukuba wathi phezu optimistic tends ukuba indawo guys ngaphandle. Zama ukuba unikezelo phambili ngaphakathi ubomi obubobakhe, ingaba yintoni yenza wena ndonwabe, kuba cozy ekubeni ngo ngokwam, kwaye ukukhula kwi-ngokwakho ngaphambi koko kunokuba uzama ukwabelana nabo bonke ungakwazi kombane kunye i-ezingaphezulu. Ngoku hayi kakhulu ukuqinisekisa ukuba eyona ndlela ukuthatha ndidinga umntu youngster kwi-indoda ke physique ngamnye umntu kufuneka akhuphe yangaphakathi abancinane omnye kuye, enjoyable sithande, playful, indlela humor. ‘umntu ke physique’ yintoni kanye kanye kukuba umntu ke physique. Ndiza wam s kakhulu kwaye ukucinga mna anayithathela umntu ke physique. Ezilungileyo ngokwaneleyo ezingaphezulu njenge Brad Pitt kunokuba Gerard Butler nangona kunjalo mna ukumbule ngamnye ukuba unayo indoda u-mzimba, kuba enyanisekileyo imbonakalo kuya kufuneka ukuba akukho ixesha elide kuba ngoko ke predominant, uxhulumaniso uthando passion trust admires kokukhona kwalomgaqo-siseko. Awufuni jonga lovely ngoko ke, ndinqwenela kufuneka imiqathango yomthetho comment kuba yakho kwixesha elizayo kwaye ithemba ufuna ukufumana ulonwabo Kwenzakala ukuba minors, udushe okanye****, ungcungcuthekiso okanye yabucala invasion, impersonation okanye misrepresentation, ubuqhetseba okanye phishing, Kwenzakala ukuba minors, udushe okanye****, ungcungcuthekiso okanye yabucala invasion, impersonation okanye misrepresentation, ubuqhetseba okanye phishing, Kwenzakala ukuba minors, udushe okanye****, ungcungcuthekiso okanye yabucala invasion, impersonation okanye misrepresentation, ubuqhetseba okanye phishing
← Indlela kuhlangana a kubekho inkqubela kwi street
Indlela eyiyo ukufumana acquainted kunye kubekho inkqubela. Psychologist ke ingcebiso →